क्वारेन्टिनमा बस्नेहरुले कोरोनालाई मजाकको रुपमा लिएका छन् : मञ्जु मलासी | NewsKarobar
गृहपृष्ठ क्वारेन्टिनमा बस्नेहरुले कोरोनालाई मजाकको रुपमा लिएका छन् : मञ्जु मलासी
क्वारेन्टिनमा बस्नेहरुले कोरोनालाई मजाकको रुपमा लिएका छन् : मञ्जु मलासी
विश्वभर कोरोनाभाइरसबाट लाग्ने कोभिड १९ ले महामारी रुप लिइरहेका बेला नेपाल पनि त्यसको चपेटामा परेको छ । केन्द्र सरकारको लकडाउनको प्रभाव देशभर परेको छ । स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारको लकडाउनको शैलीलाई मोडिफाइ गर्ने आँट गरिरहेका छैनन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये पहाडी र हिमाली जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा लकडाउन जरुरी नभएको, तराईका पनि ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय सरकारले फरक तरिकाले लकडाउन गर्नुपर्ने र कृषि क्षेत्रलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन कुनै समस्या नहुने आवाज पनि उठिरहेका छन् । सोमबार देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब सरकारले लकडाउनको मोडालिटी फरक गर्ने बताएका छन् । तर, केन्द्र सरकारका कुनै पनि निर्णयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वास्ता गरिँदैन । त्यसै सन्दर्भमा कोरोना नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयास, केन्द्र सरकारको सहयोगलगायतका विषयमा डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका प्रमुख मञ्जु मलासीसँग भूमिराज पिठातोलीले गरेको टेलिफोन कुराकानी :
कोरोना नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले के गरिरहेको छ ?
अहिले नगरपालिका कोरोनाभाइरस फैलिन नदिनका लागि सचेत भएर लागेको छ । सचेतनाका लागि गाउँगाउँ र टोलटोलमा जनप्रतिनिधिले जनचेतना फैलाउँदै आएका छौँ । विशेषगरी बाहिरी जिल्ला र भारतबाट आउनेहरुलाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गरेका छौं । क्वारेन्टिन पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार बनाएका छौं । अघिल्लो पटक भारतबाट आएकाहरुलाई घर पठाइसक्यौं । अब आउनेहरुका लागि व्यवस्था गरिरहेका छौँ ।
लकडाउनको अवधिमा बाहिर भएकाहरुलाई किन भित्र्याउनुभयो ?
कोभिड १९ विश्वकै लागि नयाँ रोग हो । यसको प्रभाव सारा संसारले नै भोग्नुपरिरहेको छ । कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि ‘लकडाउन’ मात्र एक उपाय भएको हुँदा जो जहाँ छ, त्यहीँ बस्नुपर्ने हो । तर, यो नगरपालिकाका धेरै नागरिक वैदेदेशिक रोजगारीका लागि भारत जानुभएको छ । भारतमै गएर भए पनि नगरपालिका सञ्चालनका लागि उहाँहरुको योगदान ठूलो छ । हाम्रो करदाता पनि उहाँहरु नै हो । मतदाता पनि उहाँहरु नै हो । यो विषम परिस्थितिमा भारत सरकारले उहाँहरुलाई वास्ता गरेन । त्यसपछि हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो । हामीले उहाँहरुको चित्कार सुन्न मात्र सकेनौं । रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएपछि नगरपालिकाभित्रका नागरिकलाई भित्र्याउनु हाम्रो कर्तव्य हो । त्यसैले भारतबाट आएका मात्रै होइनन्, बाहिरी जिल्लामा गएकाहरुलाई पनि अवस्था हेरेर नगर भित्र्याएका हौं । आउने क्रम जारी छ । उहाँहरुलाई सुरक्षित तरिकाले क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ ।
लकडाउनपछि कस्ता समस्या भोगिरहनुभएको छ ?
डिसेम्बर ३१ मा चीनको हुवेई प्रान्तको वुहान सहरमा यो भाइरस पहिलोपटक देखापरेपछि विश्वभर नै भाइरसले जोखिम निम्त्याउने भन्ने समाचार आयो । त्यसबेलादेखि नै हामी त्रसित भयौं । जनवरी २२ मा यो भाइरसबाट एक नेपाली पनि संक्रमित भए । त्यसबेला खासै हल्लाखल्ला नभएरै ती कोरोनाका बिरामीलाई सञ्चो पनि भयो । त्यसबेला संघीय सरकारसमेत अलमलमा देखियो । नेपालमा कोरोनाको दोस्रो संक्रमित देखिएपछि हामी सबैलाई झस्कायो । चैत ४ गते ती युवतीमा कोरोना देखिएपछि चैत ११ गते नै केन्द्र सरकारले लकडाउन घोषणा गर्‍यो । आज लकडाउनको घोषणा भएको दुई महिना नाघिसकेको छ । अहिलेसम्म हामी समस्यै‑समस्याको जालोमा अल्झिएका छौं । न कसैसँग भेटघाट न त कसैसँग बोलचाल भने जस्तै भएको छ । अर्थतन्त्र तहसनहस भइसकेको छ । जताततै ठप्प मात्रै छ । समस्या त यस्तै हुन् ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि केन्द्र सरकारबाट कस्तो सहयोग पाइरहनुभएको छ ?
अहिले केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट केही सहयोग त भइरहेको छ । केन्द्र सरकारले केही मात्रामा स्वास्थ्य सामग्री पठाइरहेको छ । प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि बाहिरबाट आएकालाई क्वारेन्टिनमा राख्न चार लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । त्यो सहयोग पनि लकडाउन सुरु भएकै बेलामा चैत ११/१२ गतेतिर भएको हो । त्यो रकम पहिलो पटक बाहिरबाट आएकालाई क्वारेन्टिनमा राख्ने बेला नै सकियो । अहिले नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट जोहो गरिरहेको छ । ३० लाखको आपतकालीन कोष बनाएका छौं, त्यसैबाट अहिले खर्च गरिरहेका छौं । भारतबाट भित्रिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । उहाँहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कसरी खर्चको जोहो गर्ने भन्ने विषयमा सोचिरहेका छौं । अहिले किटलगायतका स्वास्थ्य सामग्री पनि सकिएका छन् । केन्द्र सरकारलाई खबर गरका छौं । अब केही दिनमा आइपुग्छन् होला ।
लकडाउन र क्वारेन्टिनमा बस्ने कुरालाई स्थानीयले कसरी लिएका छन् ?
अहिले क्वारेन्टिनमा बस्नेहरुले पनि ‘मजाक’ को रुपमा लिएका छन् भने लकडाउनमा परेका नगरबासीले त झनै फितलो रुपमा नसोच्ने कुरै भएन । लकडाउन सुरु भएदेखि हामी जनप्रतिनिधि गाउँ‑गाउँ, घर‑घर धेरै पटक पुगेका छौं । वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरु गाउँगाउँमै कोरोनाबारे सन्देश छरिरहनुभएको छ । बाहिरबाट आउनेहरुले पनि आफूमा कोरोना नभएको भन्दै जिद्दि गरिरहनुभएको छ । सम्झाउँदा‑सम्झाउँदा टाउको नै दुखिसक्यो । उहाँहरुले अझ पनि सामान्यै रुपमा लिइरहनुभएको छ । तैपनि, हामीले मातहतका सबै निकायलाई नगरमा परिचालन गरिरहेका छौं । उहाँहरुले लकडाउनमा पालना गर्नुपर्ने नियम सिकाइरहनुभएको छ । केहीले त लकडाउन आफ्नै सुरक्षाका लागि हो भनेर बुझिरहनुभएको छ भने कतिपयले खासै चासो देखाइरहनुभएको छैन । उहाँहरुलाई बुझाउने हाम्रो कोसिस जारी छ ।
यतिखेर दैनिक ज्याला, मजदुरी गर्नेहरुले कसरी जीवन चलाइरहेका छन् ?
सबैभन्दा बढी समस्या भनेकै दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुलाई छ । दिनभर काम गर्ने र साँझ त्यसैले किनेर खानेहरुलाई निकै समस्या हुन्छ भनेर राहत वितरण गरेका छौं । नगरबासीको अवस्थालाई समेटेर विपन्न परिवारलाई भनेर बढी ग्राह्यता दिएका छौं । उहाँहरुलाई खोजी‑खोजी राहत वितरण गरेका छौं । नगरबासी कसैले पनि भोकले मर्नु नपरोस् भन्दै सामान्य दाल, चामल, नुन, तेल भए पनि वितरण गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म सबैलाई नगरपालिकाको स्रोतले भ्याएसम्म राहतको व्यवस्था गरेका छौं । अबका दिनमा पनि कसरी लकडाउनलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र राहतको व्यवस्था गर्ने सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी सबै वडाध्यक्षलगायत अन्य निकायसँग छलफलमै छौं ।
नगरपालिकामा कोरोना संक्रमण फैलने सम्भावना कति देख्नुभएको छ ?
हामीले कोरोना नियन्त्रणका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं । कोरोना फैलिन नदिनका लागि पनि आवश्यक सावधानी अपनाएका छौं । त्यसैअनुसार स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेका छौं । केन्द्र सरकारले भारतबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ताको पहल थालेसँगै नयाँ नक्सा सार्वनजिक गरेपछिको बढ्दो विवादका कारण भारत गएकाहरु नेपाल फर्किने क्रमले तीव्रता पाएको छ । यसभन्दा अगाडि भारतबाट आएका र जिल्लाबाहिरबाट आएका ५० जनालाई क्वारेन्टिनमा राखेका थियौं । भारतबाट आएकाहरूलाई २१ दिन र बाहिरी जिल्लाबाट आएकाहरुलाई १४ दिन राखेका थियौं । उहाँहरुको सबै रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि घर पठाइसक्यौं । अहिले पनि भारत र बाहिरी जिल्लाबाट आएका करिब ३०० जनालाई क्वारेन्टिनमा राखेका छौं । भारतबाट अझैँ ८‑१० हजार नगरबासी भित्रिने अनुमान छ । उहाँहरुलाई नजिकैका विद्यालय र ग्रामीण विकासका हलहरुमा राख्ने तयारी भइरहेको छ ।
पछिल्लाे - प्रदेश सभा बिथोल्न मन्त्री र विपक्षी दलका सांसदबीच तालमेल
अघिल्लाे - पत्रकारलाई देउवाको ढाडस‑ निडर भएर लेख्नोस्, साथमा म छु